Mitsimpona Ireo Potipotiky ny Tanàna Syriana, Arbin, Taorian’ny Daroka An-habakabaka Nahafaty Nandritra ny Fampiatoan’ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2017 12:44 GMT
Vakio amin'ny teny Português, русский, Ελληνικά, Español, English
Roa amin'ireo naratra tsaboina ao amin'ny hopitaly any Arbin. Sary nalain'i Qusay Noor. Fampiasana nahazoana alàlana.
Fampitandremana: Misy sary mahery setra ity lahatsoratra ity.
Na teo aza ny fampiatoana ady, nisy fiaramanidina mpiady maromaro nidaroka ny tanàna Syriana, Arbin, any ambanivohitr'i Damaskosy, ny 24 Jolay 2017, nahafaty sivily 11 ary naharatràna 30 farafahakeliny .
Mpanohana ny revolisiona nanomboka tany Syria enina taona lasa izay ilay tanàna, ary mbola tsy voafehin'ny tafik'i Bashar al-Assad sy ireo vondrona milisy toy ny ISIS hatramin'izao. Mitoetra any amin'ny fito kilometattra avaratra atsinanan'i Damaskaosy, Arbin no tanàna voalohan'i Ghouta atsinanana, mifanila vodirindrina amin'i Damaskaosy al-Qaboun amin'ny lafiny iray ary ireo tanànan'i Zamalka, Harasta, Madyara ary Hamoriah amin'ny lafiny iray hafa.
Araka ny Foibe Siriana Mpandinika ny Zon'olombelona, na an'ny fitondrana Assad na an'i Rosia sakaizany ireo fiaramanidina mpiady ireo. Nilaza anefa ny manamboninahitra iray ao amin'ny tafika Rosiana, nanambara fa “lainga daholo” ireo tatitra momba ilay fanafihana an-habakabaka.
Niresaka tamin'i Qusay Noor , olon-tsotra mpanao gazety sady mpaka sary izay mipetraka any Arbin ny Global Voices. ary naka vaovao fotoana fohy taorian'ilay daroka baomba. Nolazainy taminay fa tamin'ny voalohany, niantraika tamin'ny tanàna taoriana kelin'ny fodian'ny masoandro ireo fanafihana an-habakabaka, nanodidiana ny tamin'ny 7ora sy sasany hariva, izay nahatonga fisavoritahana faobe, nialohan'ny nidarohany indray teo amin'ny manodidina ny tamin'ny 11ora sy sasany alina. Nitatitra vaovao mitovy amin'izany koa ireo mponina, ho an'ny masoivohom-baovao AFP.
Nalain'i Noor ary nahazoana alàlana ho ampiasaina ireto sary manaraka maneho ny taorian'ny daroka an-habakabaka ireto. Naharay sary eo amin'ny 100 eo ny Global Voices fa tsy namoaka ireo tena sary mahery setra be satria afaka hita ao amin'ny Twitter an'i Noor ihany koa ireo. Asehon'ireo sary ny fandringanana natao amin'ny fotodrafitrasa sivily ary ireo naratra sy maty.
Arbin taorian'ny daroka baomba. Sary avy tamin'i Qusay Noor. Nahazoana alalana.
Nanampy izao ny AFP:
Ny vao maraina be ny Talata, nahita vatana kely miisa dimy napetraka teo amin'ny gorodona, nohodidinina lamba fotsy, ny solontenan'ny AFP izay nitsidika ny hopitalin'ny tanàna. Tena mbola zazakely tokoa ny roa tamin'ireo.
Raha mamerina ny voalazan'ny Filankevitra eo an-toerana ao Arbin, nitatitra ihany koa ny Masoivohom-baovao Qasioun ary Aldorar Alshamia Network, fa nofenoina balafomanga valo ny iray tamin'ireo fanafihana an-habakabaka.
Fanambaràna amin'ny teny Arabo avy tamin'ny Filankevitra eo an-toerana ao Arbin. .Navoaka ao amin'ny Facebook.. Tsindrio raha hanalehibe azy.
Nitranga ilay fanafihana, taorian'ny nanambaràn'i Rosia ny fifanarahana fampiatoan'ny fifampitifirana ny 22 Jolay, teo amin'ny governemanta Assad sy ny Filankevitra eo an-toeran'ny Ghouta Tatsinanana, izay ahatafidiran'ny Filankevitra Eo an-toerana ao Arbin (natsangana tany amin'ireo toerana tantanan'ny mpikomy ireo filankevitra toy izao mba hameno ireo fahabangana nateraky ny tsy fisian'ny governemanta). Ny 23 Jolay 2017, nolazaina ho tena “nilamina” be tokoa ny faritr'i Ghouta na teo aza nitatitra fisianà fanitsahan-dalàna roa nataon'ny fitondrana.
Tao amin'ny fanambaràna iray, nilaza izao ny Filankevitra Eo an-toerana ao Arbin:
Melohinay ny fahanginana goavana iraisam-pirenena manoloana ireo famonoana faobe ataon'ireo milisin'i Assad sy ireo governemanta manohana azy ao Ghouta Tatsinanana, tafiditra amin'izany ilay farany lasa teo, ny 24 Jolay 2017.
Nanamafy hevitra roa ihany koa izy ireo:
1- Tsy misy miaramila ao amin'ny tanànan'i Arbin.
2- Ao anatin'ny fanitsakitsahana ireo fitsipika sy lalàna iraisam-pirenena io zavatra natao io, fanapahana ny fifanarahana fampitsaharana ny ady.
Ny 25 Jolay 2017, , nanao famoriana mpanao gazety ihany koa ilay Filankevitra niampanga ny “vonomoka” ary niantso ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena hanelanelana ho toy ny mpiantoka ny fifanarahana fampitsaharana ny ady azy, nametraka ny andraikitr'io hiaro ireo sivily.
Tsy voalohany amin'ny fanafihan'ny tafik'i Assad ny tanàna io. Raha ny marina, matetika lasibatry ny fitondràna sy ireo mpiaradia aminy i Arbin tato anatin'ireo taona enina lasa izay, ary niharitra ihany koa ireo fanitsakitsahana zon'olombelona nataon'ireo vondrona mpikomy.
Ny tetikasa “Creative Memory of the Syrian Revolution”, anatin'ireo maro hafa, dia nandrakitra an-tsoratra ny ankamaroan'ireny hetsika nataon'ny fitondràna ireny tamin'i Arbin hatramin'ny 2011, ary indrindra ireo fandarohana baomba hatry ny 2012. Ireto ny sasany tamin'izy ireo:
“Ny 18/4/2012, ireo mpanaramaso avy amin'ny Firenena Mikambana dia nitsidika ny tanàna ary noraisina tamin'ny hetsi-panoherana goavana izay notoherin'ny tafiky ny fitondrana tamin'ny fitifirana tamin'ny bala tena izy an'ireo mpanohitra”
“Ny 25/6/2013, nidaroka baomba an'i Arbin ireo miaramilan'ny fitondrana, nampiasa balafomanga efatra ary nanao vonomoka tao amin'ny manodidina an'i Sunno, izay nahafaty maritiora valo ary olona folo no naratra.”
“Ny 21/8/2013, nihamafy ny adin'ny fitondrana amin'i Ghouta, ary sambany, nidaroka baomba ny tanàna ny fitondràna ka nampiasa balafomanga feno entona Sarin manempotra, araka izany nanao ny “Vonomkoa taminà vokatra Simika”.
“Nidaroka baomba ny tanàna tsy ankanavaka ny fitondrana, nampiasa ny fiaramanidin'ny tafika sy baomba miparitaka ary nanao fanafihana ara-tsimika roa hafa, ny 5/6/2014 sy 9/6/2014.”
Araka ny Ivon-toerana Firaiketana ireo Fanitsakitsahana Zo any Syria, vinavinaina ho olona miisa 1.139 avy any Arbin no novonoina hatramin'ny 1 Martsa 2015.